Ciidamo katirsanaa Dowladda Federaalka oo lagasoo Eryay Magaalada Dhuusamareeb.
Sunday July 28, 2019 - 14:03:01 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xiisada colaadeed ayaa ka jira magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud halkaas oo ay isku hor fadhiyaan maleeshiyaad daacad u ah Kooxaha Mushrikiinta Ahlusuna isku magacaabay iyo kuwa kale oo taabacsan Xasan Cali Kheyre.
Wararka ka imaanaya Galguduud waxay sheegayaan in garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ay la wareegeen maleeshiyaadka Kooxaha Mushrikiinta ayna diideen in ay soo caga dhigato diyaarad ciidamo katirsan dowladda kasoo qaadday dhanka magaalada Muqdisho.
Goob joogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaadka mushrikiinta oo wata gaadiidka Tiknikada ay garoonka macmalka Dhuusamareeb xirteen ayna amar kusiiyeen diyaaraddii soo caga dhiga laheyd in ay dib ugu laabato Muqdisho.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamo ilaala u ah Xasan Cali Kheyre iyo maleeshiyaad daacad u ah Macallin Maxamuud ay magaalada isla joogaan waxaana laga cabsi qabaa in saacad walba uu iska hor'imaad ka dhax qarxo labada dhinac.
Waxaa fashilmay oo guul darraystay wadahadallo udhaxeeyay Dowladda Federaalka iyo kooxda isku magacaawday Ahlusunna oo ku aadanaa in xaaladda lagu qaboojiyo islamarkaana labada dhinac isku dhafaan ciidamadooda si loo dhaqan geliyo heshiiskii ahaa in 'Ahlusunna' ay ku biirto dowladda.